09 Septambra 2020 - FJKM Québec - Canada
09 Septambra 2020
9 septembre 2020 by FJKM-QUEBEC
MATIO 21 : 23-31
21:23 Ary rehefa tafiditra teo an-kianjan’ ny tempoly i Jesosy ka nampianatra, dia nanatona Azy ny lohan’ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe: Fahefana manao ahoana no anaovanao izao? Ary iza no nanome Anao izao fahefana izao?
21:24 Ary i Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Izaho kosa hanontany anareo zavatra iray loha, ary raha hovalianareo izany, Izaho kosa dia hilaza aminareo izay fahefana anaovako izany:
21:25 Ny batisan’i Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va, sa avy tamin’ny olona? Ary izy ireo niara-nisaina ka nanao hoe: Raha holazaintsika hoe mantsy: Avy tany an-danitra, dia hovaliany hoe isika: Ka nahoana no tsy nino azy ianareo?
21:26 Ary raha holazaintsika hoe kosa: Avy tamin’ny olona, dia matahotra ny vahoaka isika, satria ataon’izy rehetra ho mpaminany i Jaona.
21:27 Dia namaly an’i Jesosy izy ka nanao hoe: Tsy fantatray. Dia hoy i Jesosy taminy: Izaho kosa tsy hilaza aminareo izay fahefana anaovako izany.
21:28 Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy; dia nankeo amin’ny lahimatoa izy ka nanao hoe: Anaka, andeha miasa any amin’ny tanimboaloboko anio.
21:29 Fa namaly izy ka nanao hoe: Tsy handeha aho; nefa nony afaka izany, dia nanenina izy ka nandeha ihany.
21:30 Dia nankeo amin’ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe: Handeha aho, tompoko; kanjo tsy nandeha izy.
21:31 Ka iza moa amin’izy mirahalahy no nanao ny sitrapon’ny rainy? Hoy izy: Ny lahimatoa. Dia hoy i Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialoha anareo ho amin’ny fanjakan’Andriamanitra.
1-Feno faharatsiana ny olona rehetra
Naniraka ny zanany roalahy hiasa ho azy ny raim-pianakaviana iray. Rehefa izany dia nandà ny iraka avy hatrany ilay voalohany , raha mody nanaiky kosa ny faharoa . Tsy mitovy izany valiteny izany raha jerena maimaika nefa rehefa dinihana tsara dia tena mitovy ny nataon’izy roalahy ireo satria maneho tsy firaharahana ilay rainy mihitsy ilay nandà. Nody nanaiky fotsiny nefa mpandainga ary tena mpihatsaravelatsihy tsotra izao ilay faharoa . Izany no ilazana hoe : mitovy ny olona rehetra , ratsy avokoa satria raisintsika ho solotenan’ny olona rehetra manoloana ny iraka ampanaovin’Andriamanitra ireo zavatra nataon’izy mirahalahy ireo .
2-Samy manana izay tena ao am-pony koa anefa ny olona
Ambara eto fa tsy mitovy kosa ny ao am-pony sy izay vokatr’izany teo amin’ny asa nataony . Ny voalohany izay sahy nandà mivantana mantsy dia nanenina tamin’izay vitany : indro izy nahatsiaro ny fahadisoany , nibebaka tamin’ny fahotany ka resy lahatra hankato ny tenin-drainy . Ny faharoa kosa dia efa nanamafy fo hatramin’ny farany , tsy nihevitra hiova velively . Raha ny marina anefa dia nitovy ihany ny teny sy ny iraka nataon-drainy tamin’izy mirahalahy ieo , mitovy ny fitiavan-dainy azy ireo fa ny ao am-pon’izy ireo mihitsy no samy hafa . Ny iray dia nibebaka amin’ny faharatsiany fa ny faharoa kosa vao mainka mandroso amin’ny ratsy nofidiny . Omena antsika izao teny izao mba hiheverantsika ny tenantsika satria andrasan’ny Tompo hahatsiaro ny fahadisoany ka hibebaka amin’izany avokoa ny mpanota fa tsy handroso ho amin’ny faharatsiana mandrakariva .
Marina ve fa ratsy avokoa ny olombelona ?Inona no atao manoloana izany ?